PowerPoint Isixhobo sokulungisa. PowerPoint Ukubuyisela isoftware. Lungisa iifayile ze-PPTX.
DataNumen PowerPoint Recovery Ingaba i eyona PowerPoint isixhobo sokulungisa emhlabeni. Iyakwazi ukulungisa eyonakeleyo PowerPoint Iifayile ze-PPTX kwaye ufumane kwakhona idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela unciphisa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
Ngoba DataNumen PowerPoint Recovery?
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen PowerPoint Recovery v1.9
Inkxaso yeMicrosoft PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 kunye PowerPoint yeefayile ze-Office 365 pptx.
Inkxaso yokufumana kwakhona ii-slide masters, uyilo, izilayidi, iinowuthsi, iinowuthsi kunye nemixholo.
Inkxaso yokufumana zonke iintlobo zeendaba, kubandakanya imifanekiso, iimodeli ze3D, iividiyo kunye nee audios.
Inkxaso yokulungisa PowerPoint iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibatch ye PowerPoint iifayile.
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye PowerPoint iifayile ezizakulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ke unokulungisa PowerPoint ifayile kunye nemenyu yokuqulathiweyo yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen PowerPoint Recovery Ukufumana kwakhona iifayile ze-PPTX ezonakalisiweyo
Xa akho PowerPoint Iifayile ze-PPTX zonakele okanye zonakele kwaye awukwazi ukuzivula ngesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen PowerPoint Recovery ukuskena iifayile ze-PPTX kunye nokufumana kwakhona idatha eninzi kubo.
Qaphela: Ngaphambi kokufumana kwakhona naziphi iifayile ze-PPTX ezonakeleyo okanye ezonakeleyo nge DataNumen PowerPoint Recovery, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule iifayile ze-PPTX.
Khetha ifayile yePPTX eyonakeleyo okanye eyonakeleyo ukuba iphinde ifumaneke:
Ungafaka igama lefayile le-PPTX ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana ifayile ye-PPTX ukuba iphinde ifumaneke kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen PowerPoint Recovery iya kugcina ifayile ye-PPTX efunyenweyo kwifayile entsha ebizwa ngokuba yi-xxxx_fixed.PPTX, apho i-xxxx ligama lomthombo wefayile ye-PPTX. Umzekelo, kwimithombo yefayile ye-PPTX eyonakeleyo.PPTX, igama elingagqibekanga lefayile efunyenweyo iya kuba yonakele_fixed.PPTX. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Khetha igama leFayile eliKisiweyo
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen PowerPoint Recovery Ndiza start ukuskena kunye nokufumana kwakhona ifayile ye-PPTX.
Emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukuba ifayile ye-PPTX ingafunyanwa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku unokuvula ifayile ye-PPTX efunyenweyo kunye neMicrosoft PowerPoint.
DataNumen PowerPoint Recovery 1.4 ikhutshwa nge-14 kaDisemba, 2020
DataNumen PowerPoint Recovery 1.2 ikhutshwa ngo-Novemba ka-3, 2020
DataNumen PowerPoint Recovery 1.1 ikhutshwa nge-29 ka-Okthobha ka-2019
DataNumen PowerPoint Recovery 1.0 ikhutshwa nge-18 kaJanuwari, 2019
Inkxaso yeMicrosoft PowerPoint 2007 ukuya ku-2019 kunye PowerPoint yeefayile ze-Office 365 pptx.